डा.लोहनी महेन्द्रपथमा, हलो नपाए बहिष्कार ?
काठमाडौं । डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा हालै गठन गरिएको एकीकृत राप्रपाले राजा महेन्द्रपथमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना मात्रै नभएर पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको अवधारणालाई पुनबर्हालीका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । दूरदर्शी राजा महेन्द्रले राष्ट्रियता बलियो पार्न अपनाएका विधिविपरीत कमल थापा उभिएकाले एकीकृत राप्रपा स्थापना गर्नुपरेको पार्टीले जनाएको, खबर तरुण साप्ताहिकले लेखेको छ । पार्टीको संगठनात्मक संरचना पनि राजा महेन्द्रले निर्माण...
कुन कुन जिल्लाको छापियो मतपत्र ?: ‘मतपत्र यताउति गर्ने हो भने ३१ गते निर्वाचन सम्भव छैन’
काठमाडौँ । नयाँ र साना दलले पनि मतपत्रमा आआफ्नो दलको चुनाव चिह्न माग गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने संसद्मा रहेका दललाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिएर मतपत्र छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संसद्मा रहेका दललाई मात्र दलगत चुनाव चिह्न दिने र अन्यलाई स्वतन्त्र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्थाअनुसार मतपत्र छाप्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वको नयाँ शक्ति, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको चुनावी मोर्चा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चालगायत आयोगमा दर्ता भएका अन्य दलले संसद्मा रहेका दललाई...
बाबुराम भट्टराईलगायत केही नेता पक्राउ, स्थिति तनावग्रस्त
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । दलीय हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने माग राख्दै आज निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका उनलाई कान्तिपथबाट प्रहरीले प्रक्राउ गरी लगेको छ । उनीसँगै हिसिला यमी, सांसद गंगा चौधरी, पर्शुराम खापुंग लगाएत गिरफ्तारीमा परेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीले पार्टीको निर्वाचन चिह्न पाएमा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गरेको छ । पार्टीको निर्वाचन चिह्न निर्वाचन आयोगले नदिएमा मुलुकभर नै निर्वाचन हुन नदिने सो पार्टीको तयारी रहेको पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष...
नयाँ शक्ति र फोरम नेपाल नयाँ बर्षमा एक हुँदै
काठमाडौं – डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि नै एकताको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । नयाँ शक्तिका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक रामचन्द्र झाका अनुसार एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनका अनुसार बैशाख १ अथवा पहिलो साता नै एकताको घोषणा हुन सक्नेछ । ...
प्रदेश नम्बर २मा चुनाव हुन सक्ला ? यस्तो छ ८ जिल्लाको स्थिति
काठमाडौं । मधेसी मोर्चाको प्रभाव रहेको भनिएका २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा सक्छ कि सक्दैन भन्ने कौतुहल सर्वत्र छ । यस सम्बन्धमा नयाँ पत्रिका दैनिकले एक रिर्पोट प्रकाशित गरेको छ । जसमा सप्तरीबाहेक अन्य ७ जिल्लामा निर्वाचनको माहोल देखिएको र त्यहाँ चुनाव हुन सक्ने संकेत गरिएको छ । पत्रिकाका अनुसार सप्तरीका सबै स्थानी तहमा तालाबन्दी छ भने सिराहमा मधेसी दलले पनि दल दर्ता गरेकाले चुनावको पक्षमा माहोल तयार छ । तर, उनीहरुले सबै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेका छन् । ठूला दल भने चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् । सर्लाहीका ग्रमीण क्षत्रेमा चुनावी चहलपहल देखिएको छ । मोर्चाको...
यि हुन् संसद बैठकमा धेरै ‘गयल’ हुने सांसदहरु, देउवापत्नी आरजु ‘फस्ट’
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न बैठकमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू लामो समयसम्म अनुपस्थित भएको पाइएको छ । लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने नेताको संख्या बढ्दै गएको संसद् सचिवालयको रेकर्डले देखाएको छ । २१ वैशाख २०७३ मा सुरु भएको बजेट अधिवेशन अझै जारी छ । यस अवधिमा १ सय १५ सांसद लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित छन् । उपचारको समयमा संसद्लाई जानकारी गराएको भए पनि अन्य कारणमा भने संसद्लाई जानकारी नदिएको संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । सांसदहरू विनासूचना जिल्ला भ्रमण, विदेश भ्रमण, घरायसी र पार्टी कामलगायतका कारण देखाई संसद्...
काठमाडौं । नयाँशक्ति पार्टी परित्याग गरेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र सो पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई दुबैको चरित्र चित्रण सोही पार्टीका ‘कृषक नेता’ मदन राईले गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा राईले ‘दुई सिपालु नेपाली आत्मा’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् । सो लेखमा राईले भनेका छन्- ‘नयाँ शक्तिमा यी दुई आत्मा एक ठाउँमा भए, म बूढो हलीको हलो यसमा गज्जपले जोड्ने थिएँ भनेर यिनी दुबैलाई भनेको हुँ ।’ नयाँ शक्ति पार्टी छाडेर हिँडेका रामेश्वर खनालका बारेमा राईले लेखेका छन्-‘खनालजीको बोलाइ, लेखाइ र गराइको तादाम्य र मिठास देखेर म ज्यादै...
राज्यमन्त्रीको ४५ ठाउँमा घरेडी, ६० तोलामात्र सुन
काठमाडौं । राज्यसंयन्त्रमा व्यापारी र ठेकदारहरुको प्रभाव बढ्दै छ । हालको संसदमा मात्र दुई दर्जन भन्दा धेरै ठेकदारहरु (निर्माण व्यवसायी)हरु छन् । केही त अहिले मन्त्रीपरिषदमा छन् । भूमिसुधार मन्त्री भएका बिक्रम पाण्डे मात्र होइन, गृहराज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको समेत प्रमुख पेशा ठेकदार हो । उनले ठेक्कापट्टा र राजनीतिबाट कति धेरै सम्पती जोडिसकेका छन् भन्ने उनको सम्पत्ति विवरण हेर्दा थाहा हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट हालै गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका बाँनियाको सम्पत्ति आश्चर्यजनक छ । काठमाडौं र हेटौंडाका ४५ स्थानमा त उनको जग्गा मात्र देखिन्छ ।...
यस्तो छ एमालेको ‘समृद्धि र विकासको २५ वर्षे योजना’ : ओलीको तीन बोली
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चुनावी तयारीसँगै ‘पच्चीसवर्षे विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन’ योजनासम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा सोमबार बृहत् विद्वत्सभा आयोजना गरी एमालेले त्यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढेको जानकारी गराएको हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । विसं. २०९९ सम्म विकासशील हुँदै विकसित मुलुकको दर्जामा पुर्याउने गरी नीतिगत, संरचनागत र कानुनी आधार तयार पार्ने उद्देश्यले गृहकार्य सुरु गरिएको सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘पच्चीस...
आरआरमा मतदान शुरु, क्रान्तिकारीद्धारा मतदान बहिष्कार राजनीति |
चैत्र १५, काठमाडौं । प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) मा स्ववियु निर्वाचनका लागि मतदान शुरु भएको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार अहिले बिहान ८ बजेदेखि मतदान शुरु भएको आरआर क्याम्पसका नेता तथा नेबिसंघ केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्र शर्मा गौडेलले डिजिटल दैनिकलाई बताए । आज जारी चुनाव माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले भने बहिष्कार गरेको छ । बिधार्थीको परीक्षाका बेला निर्वाचन गरिएको र रोकिएको निर्वाचन पक्रिया एकाएक सञ्चालन गरिएको भने क्रान्तिकारीले चुनाव बहिष्कार गरेको क्रात्किारीले जनाएको छ । क्रान्तिकारी चुनावबाट भागेपछि...
कांग्रेस बैठक:रमेश रिजाललाई प्रवक्ता बनाउने तयारी, मधेस र चुनावमा बहस
काठमाडौं । आइतबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार पनि जारी रहयो । दुई दिनमा करिब ३५ केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो भनाई राखेका छन्, यो क्रम अझै जारी छ । आइतबार २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बनेको छ भने विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी पनि भइरहेको छ । ४२ वटा विभाग कस–कसलाई दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन् । विभागको जिम्मेवारी यही बैठकमार्फत लाग्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैठकमा धेरैजसो मधेस र संविधान शंसोधनका विषयमा छलफल भएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा स्थानीय चुनाव ठूलो की मधेस भन्ने...
काठमाडौं महानगरमा प्रमुख दलको आँखा: मेयरमा चर्चित नेताको नाम
काठमाडौं । राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ । मुलुकका चार महानगरमध्ये जनसंख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो भएकाले मात्रै होइन, ७५ वटै जिल्लाका मानिसहरूको बसोबास भएका कारण पनि सबै दलले महत्व दिएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कुनै हालतमा पनि काठमाडौंलाई आफ्नो हात पार्ने अभियानमा जुटेका छन् । पार्टीगत संगठन सँगसँगै उम्मेदवारको व्यक्तित्व तथा जातिगत सन्तुलनले पनि काठमाडौंको निर्वाचन प्रभावित हुने गरेको छ । पार्टी संगठनका हिसाबले कांग्रेस र एमाले सबैभन्दा अघि छन् भने जातीय हिसाबले नेवार र क्षेत्री–बाहुन...
चीन जानुअघि प्रचण्डले नयाँ रेकर्ड कायम गरे
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसैलाई पनि कार्यबाहक नदिइ विदेश भ्रमणमा जाने नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । मुलुकको राजनीतिमा दर्जनौँ विकृति भित्र्याएका उनले पञ्चायतले पनि गर्न नसकेको काममा चमत्कार देखाएर पर्सि बुधबार स्वदेश फर्कदैँ छन् । तरुण साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । उनी गत बिहीबार राति चीन भ्रमणमा गएका हुन् । यसअघि दुईपटक विदेश भ्रमणमा जाँदा उनले वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई कार्यबाहक दिएका थिए । यसपटक कसैलाई पनि नदिनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीहरूको वरिष्ठता विवाद हो । प्रधानमन्त्री दाहालले निधिभन्दा वरिष्ठ हुने गरी...
कमल थापाको राप्रपा फेरि फुट्यो, दीपेन्द्रकी प्रेमिका उपाध्यक्ष बन्दै
काठमाडौं । गत मंसिर ६ गते एकीकरण भएको राप्रपा फेरि फुटेको छ । असन्तुष्ट समूहको आइतबार बिहान भएको भेलाले डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको अध्यतामा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । पार्टीको नाम एकीकृत राप्रपा राखिएको छ । चुनाव चिन्ह पुरानै कायम गरिएको छ । चुनाव चिन्ह हलो कि गाई ? भन्ने विवादका कारण राप्रपा फुटेको हो । डा.लोहनी नेतृत्वको राप्रपाले चुनाव चिनह हलो कायम गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न भने बाँकी छ । तरुण साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । नवगठित राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस संयोजक महेश्वर रोकायका अनुसार बुधबार साँझ १० देखि १२...
काठमाडौं । म्यादी प्रहरी भर्ना र सवारीसाधन खरिदका लागि अर्बौ बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी ‘ठाडो प्रस्ताव’ मन्त्रिपरिद् लैजाने तयारी गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चुनावी सुरक्षा चुनौती सामना गर्न चार अर्ब रुपैयाँको गाडी किन्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा अनावश्यक भन्दै अस्वीकार गरेपछि सिधै मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । गृहस्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका निधिको...